एल पि भानु शर्मा : आफूभित्रै विराटको गहन अनुभूति हो –‘ परमप्रकाश ’
परमप्रकाशको सुन्दरतम अनुभूति पस्किने क्रममा यहाँलाई भनूँ कि – मनुष्यले जब होस खोल्न थाल्यो, उसका विचारधाराहरु चल्न थाले, त्यतिबेलादेखि नै दुईटा प्रश्न सधैं अगाडि आए । एउटा हो– यो जीवन दुःखको, पीडाको, सुखसुविधाको मात्रै शृङ्खला हो कि ? वा यही जीवन अन्धकारबाट उज्यालोतिर, दुःखबाट सुखतिर,परतन्त्रताबाट स्वतन्त्रतातिर र जीवनका असङ्ख्य पीडाहरुका बीचबाटै पनि आनन्दतिरको यात्रा गर्न सकिन्छ ?
अर्थात् दुःखको भवसागरलाई तोडेर मानव जीवनमा सदाका लागि आनन्द वा उज्यालो आउन सक्छ त ? मनुष्यले यी दुई प्रश्न सोध्यो ।
जस्तो– यहाँलाई बताउँ कि दुईटा दियो एउटै कोठामा ल्याएर राख्यौं भने ती दुवै दियोबाट जुन प्रकाश फैलिरहेको हुन्छ, ती दुवैको प्रकाश त आखिरमा एकै हुन्छन् नि ! कोठामा प्रकाश छाउँदा यो दियोको प्रकाशचाहिँ यो र अर्को दियोको प्रकाशचाहिँ यो भन्ने हुँदैन वा छुट्याउन सकिँदैन । ठीक उसैगरी प्रकाशको बोधपछि मभित्रको प्रकाश र परमप्रकाश पूर्ण एकाकार भएको छ र यसपछि मैले ध्यान गर्छु भन्ने नै हुँदो रहेनछ । अर्थात् म ध्यान नगरी रहनै सक्दिनँ । ध्यान फेरि स्वतः भइरहेको हुन्छ ।
यो परम अनुभव हो र यो अनुभूति मनुष्यको जीवनमा लिनुपर्ने जरुरी रहेछ । किन भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि मात्र जीवन जिउनुको मजा या जीवन जिउनुको आनन्द आउँदो रहेछ । एउटा निश्छल, निष्कपट र बडो मजाको नैसर्गिक या भनूँ करिब–करिब प्राङ्गारिक र मौलिक जीवन बाँच्न सकिने रहेछ । जहाँ जालझेल छैन, केही पनि छैन र पनि जीवन आनन्दसँग चलिरहेको छ । जहाँ तनाव छैन, द्वन्द्व छैन– छन् त बाहिर सतही रुपमा मात्र । कुनै पनि कुराले अन्तर्यमा छुँदै छुँदैन । वाह म ! कुन साइतमा जन्मिएछु भन्ने भाव भित्रभित्र भइरहन्छ । जीवनमा उमङ्ग र खुसीको बहार नित्य–निरन्तर भइरहन्छ ।
(एल पि भानु शर्मा एपेक्स कलेजका प्राचार्य, वाग्मती सफाइ महाभियानका अभियन्ता, शिक्षाविद्, व्यवस्थापन विज्ञ र जीवन विकास विशेषज्ञ हुन् । ध्यानसाधनाका क्रममा शर्मालाई आफूभित्रै परमप्रकाश अनुभूति भएको थियो । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषज्ञ शर्मासँग दीपक न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप)
२०७४ असार २ शुक्रबार १६:१३:०० मा प्रकाशित